Zvishanu Zvakakanganisa Zvikanganiso Email Yako Yekutengesa Chirongwa Inofanirwa Kudzivisa | Martech Zone
Zvishanu Zvakakanganisa Zvikanganiso Email Yako Yekushambadzira Chirongwa Unofanira Kudzivisa
Chitatu, October 29, 2014 Chitatu, October 29, 2014 Amit Khanna
With pamusoro Vashandi vanosvika mamiriyoni e222 muUS chete, email ine mukana wakakura senzvimbo yekutengesa. Email chishandiso chakasiyana-siyana chinogona kushandiswa kudziisa inotonhora inotungamira, kutaurirana nevatengi varipo uye kusvika kune vanotarisira kutyaira nyowani bhizinesi kusimudzira.
Email yekutengesa nyanzvi vanonzwisisa izvo zvekutanga, senge kukosha kwekugadzira inomanikidza chidzidzo mutsara uye kusanganisira yakasimba kudana kuita. Asi kunyange vekare vatengesi veemail vanogona kuwira mumusungo wekushandisa nzira dzisingabatsiri kana nzira dzekutengesa email dzinogona kukuvadza mhando yavo. Heano mashanu makuru makuru emaimeri vatengesi vanoita - uye maitiro ekuzvidzivirira.
Kushandisa a yakaipa email kero. Kunyangwe yakatengwa kana kuunganidzwa nekufamba kwenguva mukati, yakaipa email runyorwa inogona kuperesa dambudziko. Zvirongwa zvakagadzirirwa kurwisa spam zvinotarisisa mashandisirwo emaemail asingashandi, saka kero dzakawandisa dzinogona kuwana maemail ekambani yako anobatwa mumusungo we spam. Dzidzira hwakanaka hutsanana hwe data kuti uone kuti izvi hazviitike kwauri.
Kwete kushandisa wirirana patani. Inenge makumi mashanu muzana emaemail akavhurwa parunhare mbozha, saka kana usiri kushandisa inoteerera dhizaini - dhizaini dhizaini inogonesa zvemukati mechidzitiro - hafu yevagashiri vako havazokwanise kuona email yako pasina kuburitsa mukati zvirimo uye kupuruzira kubva padivi-kuenda-padivi. Vazhinji vacharasa meseji yako pachinzvimbo.
kushandisa vatengi kutaurirana mapuratifomu emakambani eemail. Vamwe vatengesi veemail vanotenga zvinyorwa uye vanozviisa pamapuratifomu akaita seMailChimp kana ConstantContact, izvo zvisina kugadzirirwa chinangwa ichi. Muchokwadi, inotyora mazwi ebasa uye inogona kuita kuti account yako ivharwe uye yako domain yakasarudzika. Shandisa tungamira chizvarwa chishandiso se Salesgenie panzvimbo.
Kutenga zvinyorwa zvemutengo wakanyanya-wakanaka-kuve-chokwadi. Sezvo mune mamwe matunhu mazhinji ehupenyu, iwe unowana chaunobhadhara, saka tenga yako email runyorwa kubva kune inozivikanwa mbiri. Kana iwe ukanhonga imwe paDVD ye $ 100, inenge iine maemail akafa akafa, ayo anogona kuita kuti dura rako rinyorwe mazita. Yakachena rondedzero inodhura mari nekuti zvinotora mari yekuunganidza zvakanaka, kukwesha uye kuchengetedza iyo data.
Kukundikana tarisa vanogamuchira email. Mushandirapamwe weemail unobudirira unopa meseji chaiyo kune unogamuchira. Ita shuwa kuti yako email rondedzero yakanangidzirwa kune iyo demographic iwe yauri kuyedza kusvika. A pfapfaidza uye namata nzira ingaite sekutamba zvikamu, asi pane chaicho mutengo wakadzama wekutumira email, saka kungwarira kunongedzera ndiyo kiyi yekubudirira.
Kune zvakawanda zvinhu zvinopinda mushandirapamwe huru yeemail. Iko kupihwa kuri pachena chinhu chakakosha. Saizvozvowo mameseji - kubva kumutsara wenyaya kusvika kune yekuvhara kufona kune chiito. Asi zvinotora zvakawanda kupfuura chigadzirwa chinokwezva kana kupihwa sevhisi uye kopi inoshanda kugadzira mushandirapamwe unokunda. Iyo email dhizaini uye maitiro ekuendesa akakosha zvakanyanya zvakare.
Uye kumusoro-kune-dhata dhata - chaiyo email kero uye akakodzera kunongedzera ruzivo - zvakakosha zvachose zvakare. Mukutengesa, izvi zvese ndezve kuendesa iwo chaiwo meseji kune akakodzera munhu panguva yakakodzera. Iyi nheyo inobata zvechokwadi mukushambadzira kweemail zvakare. Kana iwe uchikwanisa kunzvenga aya mashanu emaimero ekutengesa eemail, unenge uri munzira yako yekubudirira.
Tags: maemail adhiresikutenga email zvinyorwayakakosha email kukanganisaemail kushambadzira zvikanganisoemail mapuratifomuwirirana patanizvikamutarisa
Amit Khanna ndiye Mutungamiri weDiki nePakati Bhizinesi pa Kufungidzira kwaanotarisira kutyaira mari yechikamu chikuru chekambani uye nekuvandudza hukama hwekupa marezinesi. Akatungamira zvakare mbiri yekambani yakabudirira Software-se-a-Service zvigadzirwa, InfoUSA uye Salesgenie.
Vhidhiyo: Kevin Spacey Anokurukura zvinhu zvitatu zvekutaura nyaya
Uye Zvino kune Rima Rutivi rweB2B Yemukati Yekutengesa